China Emulsion Sefa yemukaka Sefa ine Tri Clamp / Welded / Threaded / flanged Pipe Fittings Kugadzira uye Fekitori | Hanke
Fonera Us: 086-13171718191
Sefa mesh mapakeji
Waya pajira riya bhandi 5-heddle mes ...
Wedge waya chinovhara firita sl ...
Kukosa pajira riya Sefa BOPP f ...
Sintered firita chinhu chinogona ...
Pleated firita chinhu micr ...
Emulsion firita yemukaka firita Ine Tri Clamp / Welded / Threaded / flanged Pipe Fittings
Iyo emulsion firita inoshandisa humburumbira kana mota yakatarwa semudziyo wemagetsi. Iyo ine kusachena kubviswa kwemitengo yezvinhu zvine akasiyana viscosity masosi ekuti uone kutsetseka kusefa. Iwo mashoma firita element kunyatso kweiyo emulsion yekuzvichenesa-yega firita ndeye makumi maviri maamirioni kusangana akasiyana akaomarara ekushanda mamiriro. Nekuona musiyano wekumanikidza pakati pekunze nekunze kwefirita, inotumira chiratidzo kuPLC, inoitisa yega yekuchenesa rairo, uye inongoburitsa tsvina. Mushure mekusefa kwega kwega, iyo firita skrini inofanirwa kucheneswa munguva yekudzivirira iyo emulsion kubva pakuomesa pane iyo firita skrini, uye chiteshi chekutsva chinowedzerwa. Mushure mekutsvaira kwega kwega, iyo firita skrini inosvinwa kuburikidza neiko kumisikidza chiteshi.
Tinogona kubatanidza yako emulsion mafirita anodikanwa, ayo anozorerutsa zvinyorwa zvako, chengetedza nguva nemari, kudzikisa mutengo wekutonga, kuwedzera tekinoroji, kuwedzera purofiti, uye kugadzirisa yako yepazasi mutsara.
Tinogona kupa mhinduro kuchinetso chako chekusefa, icho chinozovandudza tekinoroji pane ekushandisa kwepamusoro-soro uye nekupa shanduko dzinodhura pazvishandiso zviripo. Isu tiri vanogadzirisa matambudziko, saka tinokupa yakakwira- mhando, mhinduro dzinodhura dzinogadzirisa nyaya dzako dzakaomarara kwazvo dzekusefa.
Kushanda musimboti: firita inoshandiswa kudzivirira iyo yakasimba inonamira kubva kunhepfenyuro yakavhenganiswa munzvimbo dzekutevera-pombi Zvikuru zvakakura zvidimbu kana tsvina zvichasara mukati maro mushure mekunge midhiya yaiswa mune chaiyo firita musimboti ,, sezvo ichigona kusvika pachikumbiro. Kana kushushikana kunoshungurudza kweiyo firita kukapfuudza kudiwa, kana iyo firita musimboti ikakuvara, unogona kubvisa firita, kuchenesa kana kushandura firita yemukati, uye kuisazve
Mafirita anogona kuenzaniswa neakasiyana macores zvinoenderana nekushandisa zvinodiwa Kune matatu marudzi ema cores (simbi mesh, perforated ndiro uye waya).
1. kuchengetedza zviwanikwa zvemvura
2. yakanaka anti-ngura, hupenyu hwakareba hupenyu
3. compact mamiriro, yakakura nzvimbo yekusefa, yakakwira tsvina inobata chinzvimbo, diki pombi yekumanikidza kurasikirwa, uye yakaderera simba rekushandisa;
4. nyore kushanda, kugadzirisa-kusununguka, uye hupenyu hwakareba.
5. Njere kutonga kweiyo emulsion firita, otomatiki mashandiro ekusefa, kuchenesa, uye tsvina tsvina, uchiona isina kuchengetedzwa uye isingamise mvura yekupa.
6. Mvura isina kukanganiswa.
7. nyore kugadzirisa nekuchengetedza
Misi, kugadzirwa kwejusi, makemikari akanaka, kurapwa kwemvura, kugadzira pepa, indasitiri yemotokari, petrochemical, kugadziriswa kwemishini, kupfeka, zvemagetsi, nezvimwe.
Pashure: Disc Sefa shizha dhisiki firita ine nyeredzi weld
Zvadaro: Sefa mesh kurongedza extruder mesh disc nehukuru hwakasiyana uye maumbirwo
Metal Milk Mafirita
Misi Pombi Sefa
Stainlss Simbi Milk Sefa
Kuzvichenesa-sefa firita dzimba dzemvura w ...